Beesha Caalamka: Baarlamaanka Cusub Yaan Dambiilayaal Lagu Darin | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Beesha Caalamka: Baarlamaanka Cusub Yaan Dambiilayaal Lagu Darin
October 17, 2016 - Written by admin
Hargeysa (Hubaal) War-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen ururro iyo dalal dhawr ah oo ka mid ah beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay walaac ka qabaan in loo soo magacaabo baarlamaanka Soomaaliya xubno taariikh ku leh colaado iyo dembiyo. Warbixintan oo ay si wada jir ah maalintii shalay ahayd u soo saareen Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Maraykanku ayaa lagu sheegay in ” magacaabista iyo doorashada dhici karta in la doorto shakhsi kasta ee ka mas’uul ahaa colaadihii sababay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya waxay ka dhigantahay tallaab dib u dhac ah xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobeyso inay furto bog cusub. Tan waa inay xisaabta ku darsadaan dhamaan inta arrintu khusayso ee muhiimka ah maadaama ay socoto u codeynta musharaxiinta Aqalka Sare, iyadoo 14,025 ergo doorasho la isku keenayo dabayaaqada bishan si ay u doortaan xubnaha Golaha Shacabka.”
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la helo kalsooni ay dadka Soomaaliya iyo duniduba ku qabaan hay’adaha qaranka ee la dhisi doono si ay sees adag u yeeshaan oo dadku ugu wada qancaan. Warbixintu iyadoo arintaa ku nuuxnuuxsanaysa waxay tidhi “Dadka Soomaaliyeed, iyo weliba saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay mudanyihiin inay kalsooni ku qabaan hay’adaha samaysmaya ee kasoo baxaya geedi-socodka doorasho ee hadda socda. Waa in dadaal kasta lagu bixiyaa sidi lagu xaqiijin lahaa in geedi-socodka ay kasoo baxdo magacaabis mas’uuliyiin sumcad leh oo loo magacaabo xafiisyada dowladda, kuwaas oo aan wiiqi doonin sharciyadda iyo kalsooni ku qabidda Dowladda iyo Baarlamaanka cusub.”
Wararka Soomaaliya ka imanaya ayaa sheegaya in ay jiraan xubno dowlad goboleedyada qaarkood soo xuleen oo sida la sheegay walaacaa ay beesha caalamku qabtaa toos u abbaarayo. Waxa kale oo lagu soo waramayaa in wax-garadka goboladaas qaarkood sheegeen in aanay beesha caalamku xaq u lahayn in ay iyadu ka taliso cidda dadku u soo xulanayaan in ay uga qayb galaan golaha baarlamanka ee cusub.